Musharraxiin durtay sharciyadda Xilka Kusimaha Madaxweynaha Koofur Galbeed – Kalfadhi
Musharraxiin durtay sharciyadda Xilka Kusimaha Madaxweynaha Koofur Galbeed
Saddex Musharax, oo dooneysa Xilka Madaxweynaha Koofur Galbeed, ayaa sheegay in maanta wixii ka dambeeya ay ka dhamaaneyso sharciyadda sii haynta Xilka Madaxweynaha Koofur Galbeed Guddoomiyaha Wakiilada Koofur Galbeed, Cabdulqaadir Shariif Sheekhunaa, oo xilkaas qabtay markii uu 7-dii bishii hore iska casilay Shariif Xasan Sh. Aadan. Warqad ay si wada jir ah ugu saxiixnaayeen ayey ku yiraahdeen “Musharrixiinta Golaha Isbeddel-doonka waxay bulshada KGS iyo Beesha Caalamka la wadaagayaan in laga bilaabo 8/12/12 Maamulka KGS galayo khal-khal dastuuri ah, isla markaana aanu Kusimaha Madaxweynaha (Koofur Galbeed) sifo sharci ah ku joogin Xafiiska Madaxweynaha”.
Musharaxiinta, oo kala ah Dr. Ibraahim Macalin Nuur, Aadan Maxamed Nuur (Saransoor) iyo Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur), ayaa Guddoomiyaha Golaha Wakiilada KGS ugu baaqay inuu Golaha hor geeyeeyo arrintan si sharciyadda ay ku dhisan tahay dowladnimada KGS loogu taagnaado. “Waxaan ugu baaqaynaa Guddoomiyaha Baarlamaanka KGS, Mudane Cabdulqaadir Shariif Sheekhunaa inuu diyaariyo Qaraar Baarlamaani ah, isla markaana uu horgeeyo Baarlamaanka sida ugu dhaqsiyaha badan, si uu xilka u hayo inta Madaxweyne laga dooranayo, inta ka horeysana uu banneeyo Xfiiska Madaxweynaha”.
Kusimaha Madaxweynaha, ahna Guddoomiyaha Golaha Wakiilada KGS eyey ku eedeeyeen inuu ku guul-dareystay inuu Doorashada Madaxweynaha KGS ku qabto waqtigeedii, saasdaraadeedna ay ku baaqayaan in la sameeyo Gole suurageliya iney doorashadaas si fiican u dhacdo. “Musharixiinta Golaha Isbeddel-doonka ah waxay ku baaqayaan inta laga dooranayo Madaxwenaha (KGS) in la sameeyo Gole Ku-meel-gaar ah, oo loo wada dhan yahay, kaasoo suuragelinaya in ay doorashadu ku dhacdo jawi leysla ogol yahay” ayaa lagu yiri waraqdda ay soo saareen.
Waxay sheegeen iney ka walaacsan ciidanka ay DFS geysay Baydhabo, iyagoo xadfay iney ammaan darro ku soo kordhiyeen magaalada. Waxay soo dhaweeyeen go’aanka Guddoomiyaha Golaha Shacabka uu uga hor yimid ciidaankaas loo daabulay Baydhaba iyo siduu u garab istaagay Musharaxnimada Mukhtaar Roobow. Beesha Caalamka iyo iyo Dadka Reer KGS ayey ugu baaqeen iney joogaan goobta doorashada 19-ka bishan, ayna taageeraan oo ay la socdaan Doorashada Madaxweynaha KGS.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo ka hor yimid kala eryiddii Guddiga Maaliyadda
Haweeka Aqalka Sare oo doonaya iney beddelaan tacaddiyada ku saleysan jinsiga